टीका सानुको घर पुग्दा सबैको रुवाबासी, थामिएन मन, रोकिएन आशु ! [भिडियो]
टीका सानुको घर पुग्दा सबैको रुवाबासी, कसैको मन थामिएन ! [भिडियो]
अहिलेको चर्चित लोकदोहोरी गायिका हुन् टीका सानू, ‘सानै देखि गीत संगीतमा रुचि राख्दै अगाडि बढेका उनी अहिले काठमाडौंमा रहेर गीत संगीतकै बाटोमा हिडिरहेकी छिन् । ‘विशेष त लाइभ दोहोरी प्रतियोगिताहरुमा सहभागी हुँदै कहिले जीत कहिले हारको सामना गरेर अहिले आफ्नै स्वरमा धेरै गीत रेकर्डङ गरिसकेकी सानू लोकप्रिय कार्यक्रमको सञ्चालिका पनि हुन् ।,
लाइभ दोहोरीकी रानी भनेर चिनिने टीका सानूको व्यक्तिगत जीवन भने कहालीलाग्दो नै छ । दाङ तुलसीपुरमा जन्मेका उनी घरको ४ दिदिबहिनी मध्य माइँली हुन् । पारिवारिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको कारणले अाफूले सोचे जस्तो सफलता पाउन नसकेको पनि बताउँछिन् । घरबाट कार्यक्रम सम्म जान पनि गाडी भाडा तिर्ने पैसा नहुँदाको पल सम्झेर आखामा आँसु रोकिँदैन….